नेपालमा भएको आयातको आधारमा नेपालबाट सबैभन्दा धेरै रेमिटान्स भारतले लैजान्छ । भारतकै सुचना र रेर्कड अनुसार नेपाल भारतको लागि रेमिटान्स दिने देशको सुचीमा आठै स्थानमा छ । त्यत्रो ठुलो देशको लागि नेपालबाट आठाैं स्थानमा छ । त्यत्रो ठुलो देशको लागि नेपालबाट आठै स्थानको रेमिटान्स पढाउने देश कसरी बन्न पुग्यो यो आजको बहसको कुरा हो ।
हामी राजनितिक मुद्धाहरुलाई अनावश्यक बनाइ रहने र त्यसको बदलामा भारतिय सुचना सञ्चार प्रवाह गर्ने माध्यमलाइ बन्द गर्ने भनी रहँदा हाम्रो ध्यान कतातिर छ ? एकपल्ट हामीले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ । काेरोनाको कहरले गर्दा घर फर्केर भारतिय मजदुरलाई रोकेर नेपाल फर्की रहेको बेरोजगार युवाहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने तर्फ हाम्रो ध्यान जानु जरुरी छ । यसको लागि गृहकार्य गनृुपर्ने टड्कारो देखिएपछि हाम्रो देशमा निर्माण क्षेत्रमा पाँच लाख दक्ष र अदक्ष मजदुरहरुले भारत तर्फको कार्य गरी रहेको नेपाल निर्माण व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
यो अध्ययनले भारत, चिन, भुटान, पाकिस्तान, श्रीलका र बगंलादेशले पनि हाम्रो देशको सुचि रेमिटान्स प्राप्त गर्ने गन्तव्यको रुपमा प्रस्तुत गरेको पाइन्छ । त्यसो त नेपालबाट बाहिरीने रेमिटान्सको ९३.४९ प्रतिशत भने भारत नै जाने गरेको देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा भारतबाट नेपालमा आउने भन्दा जानेको आयतन बढी नै छ । हामीले एकपल्ट परम्परावादी सोचबाट बाहिर निस्कन पर्ने देखिन्छ ।
हामीले नयाँ अकंगणित पढ्न पर्ने अवस्था आएको छ । यहाँका अर्थविदहरुले लगाएका पुराना चस्मालाई अलि सफा गरी पुछ्न जरुरी छ । हिजो प्रयोग गरिएका सम्बन्धका अक्षरहरुलाइ बदल्न जरुरी छ । भारतले हामीलाई रोटीवेटीको सम्बन्ध भन्दा गर्व गरिरहेको पाइन्छ । के हाम्रो श्रम रोटीसगँ साटेको भन्न खोजेको हो वा वेटीसँग ? यस्तो परम्परावादी भावनात्मक कुरामा हाम्रो अर्थतन्त्र समलिएको छ नयाँ सोच नया परिवेश र कोरोनाको कारण घर गएकाहरुलाई हामीले मितक र कुटिल तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सके देशको अर्थतन्त्र छिटै पुरानो लयमा फर्काउन सक्ने अवस्था श्रृजना गर्न सकिन्छ ।
कोभिड १९ माहामारी को कारणले रोजगारी गुमाएको तथा कार्य अवधिका भिसा सकिएकाहरु अन्तराष्टिय उडानहरु खुलेपछि करिब २ लाख ८० हजार तुरुन्तै नेपाल आउने अवस्थामा छन् । यता यो महामारीमा पनि हामी श्रम स्विकृति दिएर विदेश पठाउन आवेदन खुल्ला गरिसकेका छौ । हिजो नेपालबाट अदक्ष कामदारका रुपमा गएका नेपालका श्रमिकहरु कोहि पूर्ण दक्ष कोहि अर्ध दक्ष बनिसकेको अवस्थामा फर्कदै छन्। एकपल्ट हामी भाषण होइन प्रयोग गरेर हेरौ । विभिन्न कालखण्डको अर्थव्यवस्थालाई हामीले विभिन्न दातृ निकाय र देशबाट सहयोग लिएर देश चलाएको अवस्थाबाट हामी आत्मनिर्भर र अर्थतन्त्रको खाेजीमा छौँ ।
देशका सानाठुला परियोजनाका लागि विदेशबाट आयतित मजदुर कामदारहरुको परम्परालाई हामीले कोभिड १९ को माहामारीका कारण रोक्न सक्ने अवस्था छ । यो एउटा देशको लागि सुन्दर सपना बोकेकाहरुले बुभ्ने कुरा हो । अब हामी सबैले सबै नेपालीलाई यो अवस्थाको जानकारी गराउदै नयाँ नेपालको लागि आर्थिक शुद्धिकरण तर्फ लाग्नुपर्ने समय हो । के यो सम्भव छ ? यो सम्भव छ र यो प्रभावकारी पनि हुन्छ ।
हाम्रो देशका युवाहरु शिप र अनुभवको साथ नेपाल फर्किरहेका छन् । नेपालमा विदेशबाट आउने र वायुमार्गबाट आउनेहरुको हकमा एउटै हो । हामीले (राज्य) ले ति विदेशबाट फर्केकाहरुलाई उनिहरुको अनुभव कार्य गरेको क्षेत्र नेपालमा बस्ने ठाउँ घरमा भएका सदस्य र विदेशमा बिताएका समय थप आफुसँग भएको सीप सम्बन्धि दस्तावेज बनाउने र उनिहरुलाई नेपाल आउने बितिक्कै फारम भर्न लगाउने त्यसबाट हाम्रा आवश्यकता र राज्यले ल्याएको विभिन्न रोजगारी मुलक योजना सगँ सजिलै जोड्न सकिन्छ ।
हामी भने विश्वको श्रम बजारको उर्वर भुमी जुन देशमा युवाहरुको पर्याप्त सम्भावना भएको भन्ने विश्व बजारले अनुसन्धानमा देखाएपनि हाम्रो लागि निति बनाएर हाम्रो श्रम शक्तिलाइ अर्थमा बदल्न कस्ले रोकेको छ हामीलाई ? देशको परम्परावादी आदर्श हामीलाई हाम्रो प्रगती मार्ग भेट्न गारो भै रहेको छ ,एउटा कुरा हाम्रो देशमा जुनसुकै क्षेत्रको पनि पुरा डेटा ( तथ्याङक) हरु सहि र साँचो भने छैन ।
हाम्रो देशमा हामीले हाम्रो तथ्याङकहरुको लागि पूर्ण रुपमा लगानी गरेर आधिकारिकता दिन सकेको छैन । बैँक वितिय क्षेत्रको बारेमा नेपाल राष्ट बैंकले प्रस्तुत तथ्याङक र अर्थमन्त्रालय वा अन्य सरोकार वाला निकायले प्रस्तुत तथ्याङकहरु सहि नभएको हामीले बारम्बार देखेका छौ । त्यसै कारण हाम्रा देशका युवाहरु फर्कदा सही तथ्याङक लिनुपर्याे र त्यो तथ्याङकमा राज्यले एउटा श्रमीकको प्रतिबद्धता सहितको फारम भराउनु पर्यो त्यो प्रकारको फारम उसले अनलाइनबाट भर्न पाउने व्यवस्था पनि गर्नुपर्यो यसो हुँदा हामी निजी क्षेत्रले राज्यसँग त्यस्तो सुचना मागेर आफूलाई सुहाउदो श्रम छानेर योजनामा लगाउनु सहयोग पुग्ने पक्का कुरामा विमति हुदैन ।